किन फरफराउँछ आँखा ? कुन आँखा फर्फराउदा के-को संकेत गर्दछ ? जानी राखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»किन फरफराउँछ आँखा ? कुन आँखा फर्फराउदा के-को संकेत गर्दछ ? जानी राखौ
By रिता घिसिंग on ४ माघ २०७४, बिहीबार ०९:३१ स्वास्थ्य/जीवनशैली
भोकले बताउँछ स्वास्थ्य समस्या
भोक सबैलाई लाग्छ । भोक लाग्नु स्वभाविकै हो । भोकले शरीरलाई उर्जाको आवश्यकता भएको संकेत दिन्छ । यद्यपी, भोकका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् ।
एउटा भोक यस्तो हुन्छ, जसले कुनै पनि खानेकुरा खान प्रेरित गर्छ । त्यस्तै, अर्को भोक यस्तो हुन्छ, जसले एउटा निश्चित स्वाद चाख्नको लागि मात्र शरीरलाई पे्ररित गर्नेगर्छ । र, उक्त स्वाद चाखेपछि मात्र जिब्रोले सन्तुष्टी प्राप्त गर्छ । सामान्यतयाः भोकले नै तपाईको स्वास्थ्य अवस्था पनि बताइरहेको हुन्छ ।
-यदी तपाइलाई हरेक पटक भोक लाग्दा एकै किसिमको परिकार खान मनलाग्छ भने तपाईको शरीरमा पोषणतत्वको कमी भएको हुनसक्छ ।
२. यदी तपाइलाई एकदमै भोक लाग्छ र भोकको साथै टाउको दुख्न थाल्छ भने त्यो माइग्रेनको पहिलो संकेत हुनसक्छ । यस परिस्थितिमा मानिसलाई चकलेट खान मन लाग्छ ।
३. यदी तपाइलाई भोकको सट्टा ज्यादा प्यास लाग्छ भने रगतमा चिनीको गडबडीका कारण पनि हुनसक्छ । यस्तो समस्या भएमा बारम्बार पिसाब लाग्न सक्छ ।
४. बारम्बार चिप्स खान मनलाग्नु वा तारेको खानेकुरा खान मनलाग्नु डिहाईड्रेसनको लक्षण हुनसक्छ । शरीरमा खनिज पदार्थ तथा इलेक्ट्रोलाइटको सन्तुलन विग्रदा यो स्थिति आउने गर्छ । यसले गर्दा निद्रा पनि पूरा लाग्दैन ।
५. गर्मी होस् वा जाडो, जुनसुकै मौसममा पनि वरफ वा आइसकि्रम खान मनपर्छ भने शरीरमा आइरनको कमी भएको हुनसक्छ ।
(डा. मोनिका कर्मचार्य मेडिकल डाइरेक्टर, दिव्यज्योती आई एण्ड इयर कियर सेन्टर प्रा.लि झापामा कार्यरत छिन्)